WAALI: Sir Fashiliyaha Football Leaks Oo Banaanka Soo Dhigay Qodobo Waali Ah Oo Ay Arsenal Ku Dartay Heshiiskii Ay Aubameyang Kula Soo Wareegtay. – GOOL24.NET
WAALI: Sir Fashiliyaha Football Leaks Oo Banaanka Soo Dhigay Qodobo Waali Ah Oo Ay Arsenal Ku Dartay Heshiiskii Ay Aubameyang Kula Soo Wareegtay.
Sir fashiliyaah Football Leaks ayaa banaanka soo dhigay faah faahinta heshiisyo badan oo kubbada cagta ah oo ay kooxaha Premier league sameeyeen bishii January, waxaana ka mid ah heshiisyadii Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez, Mkhitaryan, Van Dijk iyo kuwo kale, laakiin waxaa layaab noqotay qodobo ku jira heshiiska ay Arsenal kula soo wareegtay Pierre-Emerick Aubameyang iyo qodobo waali ah oo lagu daray.
Football Leaks oo sanadihii ugu danbeeyay si aan hore loo arag u fashilinayay siraha qarsoon ee heshiisyada ciyaartoyda kubbada cagta aduunka ugu caansan ayaa wali halkiisa ka sii wada in uu soo bandhigo xogaha heshiisyada qarsoon ee aan war badan laga hayn waxaanad la yaabi doontaa arimo lagu daray heshiiskii ay Arsenal kula soo wareegtay Aubameyang.
Bishii January waxay Arsenal u ahayd mid mashquul badan waxayna la soo saxiixatay Pierre-Emerick Aubameyang halka Alexis Sanchez oo kooxdeeda ka baxay ay ku soo badaltay Henrikh Mkhitaryan, waxaana sidoo kale Gunners ka baxay Olivier Giroud iyo Theo Walcott iyada oo waliba Mesut Ozil heshiis cusub ka saxiixatay.
Laakiin warka ugu wayn ee suuqii bishii January ay Arsenal ciwaanada ku qabsatay ayaa ahaa in ay Aubameyang ka soo bixisay 56 milyan gini laakiin Football Leaks ayaa soo bandhigay qodobo waali ah oo ay adag tahay in la rumaystaa in qandaraaska Aubameyang lagu daray.
Ugu horayn Football Leaks ayaa soo bandhigay in mushaarka Aubameyang ee Arsenal uu yahay 198,000 kun oo usbuuciiba laakiin waxaa layaab noqotay in markii uu Gunners heshiiska u saxiixayay farta laga saaray lacag dhan 18.2 milyan gini- Hadda waa 18.2 milyan gini oo ahayd lacag isaga si gaar ah loogu siiyay in uu heshiiskan aqbalay!!.
Wax kale oo uu Football Leaks banaanka soo dhigay in heshiiska Pierre-Emerick Aubameyang ee Arsenal lagu daray in kulankasta oo uu Gunners ugu soo bilawday Premier league oo ay kooxdiisu guulaysto uu heli doono 50,000 kun oo gini taas oo la shaaciyay in uu haddaba helay £250,000 kun oo gini ee kulamadii uu Gunners ugu soo bilawday ee ay guulaystay.
Qodob kale oo layaableh oo faah faahinta heshiiska Aubameyang ee Arsenal lagu soo bandhigay ayaa ah in xidiga ree Gabon la siiyay £2.26 milyan gini oo ah lacag guno ah haddii ay Arsenal u soo baxdo Champions League ee xili ciyaareedka soo socda balse iyada oo aan Gunners soo bixin uu lacagtan helay.
Heshiiskii Aubameyang ee Arsenal ayaa sidoo akle lagu daray lacag guno ah oo £15.15 milyan gini ah taas oo afar jeer la kala bixin doono waxaana guud ahaan lacagtan la bixin doonaa inta uu socodo heshiiskiisa dhacaya 2021 iyada oo qaybta kowaad oo ah 300,000 kun oo gini la siin doono marka uu gaadho 25 ka gool iyo gool caawineed ee waayihiisa Gunners ugu horeeya wuxuuna haddaba haystaa 13 gool iyo gool caawineed.
Laakiin kulankasta oo Premier league ah oo uu Aubameyang ugu soo bilawdo Arsenal isla markaana ay guulaysato waxa uu kooxdiisa ka heli doonaa 50,000 kun oo gini taas oo ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee uu Football Leaks banaanka soo dhigay.
FIIRO GAAR AH: Waxa kale oo aanu insha Allah idiin soo gudbin doonaa faah faahinta lacagaha lagu daray heshiisyada Alexis Sanchez ee Man United, Virgil Van Dijk ee Liverpool iyo waliba heshiiskii uu Mkhitaryan ugu biiray Gunners oo dhamaantood uu Football Leaks shaaciyay.